Kpachara anya maka ịwụnye steepụ igwe anaghị agba nchara - China Foshan Hamis Steel
Igwe anaghị agba nchara Ngidi Kpaa
Nlezianya maka ịwụnye steepụ igwe anaghị agba nchara
Steepụ igwe anaghị agba nchara na -ewu ewu ma n'ime ma n'èzí, ọ bụkwa otu n'ime steepụ ndị a na -ahụkarị. Kedu ihe anyị kwesịrị ị paya ntị na mgbe anyị na -etinye steepụ igwe anaghị agba nchara?
1. Nlezianya maka ịwụnye igwe steepụ igwe anaghị agba nchara
1. Ekwesịrị ịrụ nrụnye nke ụzọ ụgbọ oloko dabere na ihe achọrọ na usoro nke ahịrị ink na -ewu elu site na mmalite.
2. A ga -ebu ụzọ tinye mkpanaka ndị dị na nsọtụ abụọ nke ikpo okwu na mbido steepụ, wee kwụnye nrụnye.
3. Mgbe ị na -arụ ọrụ ịgbado ọkụ, mkpanaka ịgbado ọkụ kwesịrị ịbụ otu ihe ahụ dị ka ihe ndabere. N'oge nrụnye, ekwesịrị idobe osisi na akụkụ agbakwunyere ruo nwa oge site na ịgbado ọkụ. Mgbe mgbatị na mgbatị kwụ ọtọ, ịgbado ọkụ kwesịrị ịdị ike.
4. Mgbe a na -eji ihe njikọ maka njikọta, oghere dị na efere igwe dị na ala ogwe osisi kwesịrị ịhazi ya ka ọ bụrụ oghere okirikiri ka mgbochi mkpọchi ahụ ghara ịdị na ọnọdụ ha. Enwere ike ime obere mgbanwe n'oge nrụnye. Mgbe a na -ewu ya, jiri mgbanye ọkụ eletrik gwuo mkpọchi mkpọsa na ntọala osisi nrụnye, jikọọ osisi ahụ wee dozie ya ntakịrị. Ọ bụrụ na enwere mperi na nrụnye nwụnye, jiri igwe mkpuchi siri ike were dozie ya. Mgbe mgbatị kwụ ọtọ na ịdị elu, mechie kposara. okpu.
5. Mgbe ịtinyechara mkpanaka ndị ahụ na nsọtụ abụọ, jiri otu ụzọ ahụ wụnye okporo osisi ndị fọdụrụ site na ịdọpụta eriri.
6. Ntinye osisi ahụ ga -akwụrịrị ọtọ ma ghara ịtọpụ.
7. A ga-eji akụkụ mgbochi osisi na akụkụ njikọ njikọ ya na mgbochi nchara na mgbochi nchara mgbe etinyere ya.
Nke abụọ, usoro nwụnye nke igwe anaghị agba nchara steepụ
1. Nwụnye nke agbakwunyere igwe anaghị agba nchara handrails
Ntinye nke akụkụ agbakwunyere (akụkụ agbakwunyere) steepụ igwe kwụ ọtọ agbakwunyere nwere ike ịnwe akụkụ ndị agbakwunyere. Usoro a bụ iji mgbatị mgbasa ozi na efere nchara iji mee njikọ njikọ arụnyere. Buru ụzọ tinye ahịrị na ntọala ihe owuwu obodo wee chọpụta kọlụm Dozie ọnọdụ isi ihe, wee gwuo oghere n'elu steepụ nwere mmetụta mmetụta, wee wụnye mkpọchi mgbasa. Mkpọchi na -edobe ogologo zuru oke. Mgbe etinyere ihe mkpọchi ahụ, kechie mkpọchi ya na ịgbanye nut na kposara ka mkpụrụ na efere efere ghara ịtọghe. Njikọ dị n'etiti handrail na elu mgbidi na -ewerekwa usoro a dị n'elu.
2. Kwụọ ụgwọ
Ịtọpụ n'ihi nrụnye agbakwunyere n'elu nwere ike ibute njehie. Ya mere, tupu etinyere kọlụm ahụ, ekwesịrị idobe ahịrị ahụ ọzọ iji chọpụta izi ezi nke ọkwa efere e liri na ogwe kwụ ọtọ. Ọ bụrụ na enwere ndahie ọ bụla, ekwesịrị idozi ya n'oge. Ekwesịrị ijide n'aka na ogidi niile nke igwe anaghị agba nchara na -anọ na efere nchara ma nwee ike ịgbado ya gburugburu.
3. A na -ejikọ ogwe aka na kọlụm
Tupu echichi ihe nrụnye aka na kọlụm na -ejikọ kọlụm ahụ, a na -etinye ahịrị site na ahịrị gbatịrị agbatị, a na -arụkwa oghere na njedebe elu dị ka akụkụ nke nrịgo nke steepụ na okirikiri handrail ejiri. Mgbe ahụ tinye ihe nrụnye ahụ ozugbo n'ime oghere nke kọlụm, ma wụnye ya site na ịgbado ọkụ site n'otu nsọtụ ruo na nke ọzọ. A na -arụnye ihe nrụnye aka dị n'akụkụ n'ụzọ ziri ezi yana njikọ ya siri ike. Mgbe a kwụsịrị ọkpọkọ nchara dị n'akụkụ, a na -ejikọ ya na igwe anaghị agba nchara electrodes. Tupu ịgbado ọkụ, a ga-ewepụrịrị ntụpọ mmanụ, burrs, ntụpọ nchara, wdg n'ime oke nke 30-50mm n'akụkụ akụkụ nke weld ọ bụla.
Atọ, na -egweri ma na -asachapụ
Mgbe mgbatịchara aka na aka aka niile gwụchara, jiri igwe ihe igwe ihe na -egwe egwegharị mee ka ọ dị nro ruo mgbe a na -ahụghị welds ya. Mgbe ị na -asacha, jiri wiil flannel na -egweri ma ọ bụ nwee mmetụta ịkpụcha, ma jiri mpekere polishing kwekọrọ ekwekọ n'otu oge, ruo mgbe ọ ga -abụ otu ihe dị n'akụkụ ihe dị n'akụkụ ya, na ịgbado ọkụ abụghị ihe doro anya.
4. Mgbe etinyere ikpere aka, a na -edobe nsọtụ abụọ nke ogwe aka kwụ ọtọ na nsọtụ abụọ nke mkpanaka kwụ ọtọ ruo nwa oge site n'ịkwado ntụpọ.
Oge ezipụ: Sep-02-2021